Ilay Andro Nandraràn’i Rosia Ireo Vavolombelon’i Jehovah · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2017 2:08 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, 日本語, Español, Italiano, English
Sary: Flickr / namboarin'i Kevin Rothrock
Hafahafa be ny mahita azy ity voasoratra, indrindra moa fa ny mahalala hoe tena marina ilay izy, saingy dia io izy io: noraràn'i Rosia tamin'ny fomba ofisialy ireo Vavolombelon'i Jehovah. Taorian'ny ady teny amin'ny fitsarana naharitra efa ho ampolo taona, navoakan'ny Fitsarana Antampony tamin'ny Alakamisy teo fa mpikambana anaty vondrona mahery fihetsika iray ireo 175.000 ao amin'ny Vavolombelon'i Jehovah, amin'ny fametrahana ilay vondrona hitovy laharana amin'ny ISIS.
Efa nogiazan'ny fanjakana sahady ny fanànan'ilay fiangonana .
Niteraka hanihany, fampitahana tamin'i Hitler, ary fankalazàna ny fankahalàna an'ity “sekta mamotika” ity tao amin'ny Twitter ilay fandraràna ireo Vavolombelon'i Jehovah. Amin'ny teny hafa, dia andro iray toy ny andro rehetra ihany tety anaty serasera ilay izy, na dia hisy fiantraikany mandritry ny fotoana maharitra aza ilay fanapahankevitra noraisin'ny Fitsarana Antampony.
Kaonty Twitter iray mpanesoeso no nahita fomba iray mahatsikaiky nandabohana ireo tantara ratsy rehetra iainan'ny politika ao Rosia ankehitriny ho anaty vazivazy tokana, amin'ny fampitrakàna ny loha hibanjina ireo tatitra momba ny fanenjehana faobe atao an'ireo pelaka ao Tsetsenia sy ny fitokonana manerana ny firenena ataon'ireo mpamily fiarabe:
Araka izany ny fanoherana tonga lafatra androany dia toy izao no endriny: Tsetsenina iray, pelaka sady mpamily fiarabe ary mpikambana ao amin'ny sekta Vavolombelonì'i Jehovah.
Kaonty iray hala-tàhaka antsoina hoe “Jesosy Kristy” no nanandrana nivazivazy hihataka kely amin'iretsy Kristiana lasa tsy ara-dalàna amin'izao fotoana:
Nosokajiana ho Ahiahian'i Jehovah ireo Vavolombelon'i Jehovah. Na izany na tsy izany, olona kapotsaka ry zalahy ireny. Fa izao, ho fitadidy, tsy miaraka amin'ireny bandy ireny aho.
Pavel Chikov, filohan'ny vondrona mpiaro zon'olombelona Agora, dia nampitandremany ny Fitsaràna Antampony ao Rosia fa dia nanangana 175.000 mpiara-manao heloka bevava fotsiny :
Misy 175.000 ireo mpikambana mavitrika avy amin'ny Vavolombelon'i Jehovah ao Rosia amin'izao andro izao (Wikipedia). Nomen'ny Ministeran'ny Fitsaràna ao Rosia fiarovana araka ny lalàna izy rehetra ireo manoloana ny fanenjehana momba ny heloka bevava. Misy maherin'ny 8 tapitrisa ireo Vavolombelon'i Jehovah manerana ny tany. Nataon'ny ministeran'ny fitsarana ao Rosia ho jiolahy mpandika lalàna daholo izy rehetra ireny.
Vasily Oblomov, mpitendry mozika fantatra amin'ny fomba fijeriny politika mirona amin'ny fanoherana, nanontany ny antony maha-tsy ara-dalana ilay fandraràna ireo Vavolombelon'i Jehovah, tamin'ny fanamarihana ny fanaovan'i Rosia ho asan-devoly izay rehetra kabary heverina ho manafintohina ny olon'ny finoana (relijiozy) :
Fa nahoana ilay fandraràna ireo Vavolombelon'ny Jehovah ao Rosia no tsy iharan'ilay lalàna manohitra ny “fanafintohinana ny fihetsehampo ara-pinoana ” ananan'ireo mpikambana ao anatin'io fikambanana io?
Maro ireo mpampiasa Twitter, isan'ireny i Ekho Moskvy, toniandahatsoratry ny Alexey Venediktov, no nampitaha ilay fanapahankevitry ny Fitsarana Antampony tamin'ny fandraràna Fasista nataon'i Alemaina tamin'ireo Vavolombelon'i Jehovah:
Nandà tsy nanaiky an'i Hitler ho Führer ireo Vavolombelon'i Jehovah, nolavin'izy ireo ny hanao ilay fomba fiarahaba Nazi, nolaviny ny hanao raharaha miaramila Nazi, ka dia noraràna.
Vladimir Varfolomeev, lefitry ny toniandahatsoratry ny Venediktov, nitondrfa ity fampitahàna ity lavidavitra kokoa, tamin'ny fanaovana ny lisitr'ireo tantara ratsy marobe vao haingana teo amin'ny politika (ireo fanamarihana manenjika ny Jiosy nataon'ireo mpanao lalàna federaly, ny fanenjehana ny pelaka ao Tsetsenia, ny fakàna an'i Krimea ) izay toa mamerina ny fikisahan'i Alemaina nankany amin'ny fasisma. Nasian'i Varfolomeev tsindrimpeo ilay fanakianana miharo vazivazy hoe tian'ireo mpikatroka mpomba an'i Kremlin ny mampitaha an'i Alexey Navalny, ilay mpitarika fantadaza ny fanoherana politika, amin'i Hitler:
Fankahalàna Jiosy. Fanenjehana ny pelaka. Fandraràna ireo Vavolombelon'i Jehovah. Fakàna faritany vahiny. Ary dia milaza ry zareo fa Hitler iray hafa indray i Navalny.
Tamin'ny volana lasa, nisy mpitondra tenin'ireo Vavolombelon'i Jehovah nilaza tamin'ny The Moscow Times fa ahian'ny fikambanany hiteraka “tena asa mahery fihetsika” tokoa hihatra amin'ireo mpino ao Rosia ilay fandraràna tsotra izao ny vondron'izy ireo, tafiditra amin'izany ny fandratràna ara-batana.
Manery ireo fikambanana Vavolombelon'i Jehovah miisa 396 voasoratra manerana an'i Rosia hampitsahatra avy hatrany ny asany ilay fanapahankevitra navoakan'ny Fitsarana Antampony tamin'ny Alakamisy. Tsy ara-dalàna manomboka izao ny fikarakarana fivorian'ny mpikambana na fanapariahana bokim-pivavahana ataon'ity vondrona ity.